Bazary Be – Toamasina: Mpamongady “friperie” voatafika, lasa ny volabe tao anaty sakaosy
Omaly talata 07 novambra atoandro, tamin’ny 11ora sy sasany, fotoana firavan’ny mpianatra no nitranga ny fanafihana. Vola haterina any amin’ny banky no nosavoritahan’ireo jiolahy mitam-basy.
Iny hiditra ao anaty fiara 4x4 iny indrindra, ilay karana tompony, izay nitondra sakosy nisy vola am-polony tapitrisa Ariary haterina eny amin’ny banky no nisy roa lahy nanantona azy sy nanambana basy azy teo amin’ny lohany nanery azy hanome ilay sakosy nisy ny vola, nisy roa lahy hafa nitaingina scooter, nitondra basy PA hafa koa niandry tsy lavitra teo nanara-maso.
Niditra an-tsehatra nanenjika azy efa-dahy ny polisin’ny UIR (Unité d’Intervention Rapide), vao nahazo fampandrenesana, saingy nananosarotra ny fifanenjehana noho ny fotoana nifanojo tamin’ny firavan’ny mpianatra.
Najanon’ireto andian-jiolahy ny moto nentiny ka nandositra an-tongotra niditra ireo lalam-pasika tao Tanambao V izy ireo, ka nampanano sarotra ny fanarahan-dia.
Tamin’ny alalan’ireo moto nijanona no nahazoan’ny polisy ny mombamomba ireo jiolahy ireo, ka tamin’izany no nahalalana fa avy any Ambovombe Androy avokoa izy efa-dahy nanafika tranombarotra « Friperie » ireto.
dimanche, 10 décembre 2017 00:30
jeudi, 07 décembre 2017 05:49
mardi, 05 décembre 2017 00:55
lundi, 04 décembre 2017 08:59
lundi, 04 décembre 2017 06:32
lundi, 04 décembre 2017 04:40
lundi, 04 décembre 2017 04:34
lundi, 04 décembre 2017 04:29
lundi, 04 décembre 2017 03:51
lundi, 04 décembre 2017 02:08